October 1, 2020 - Padaethar
October 1, 2020 by Padaethar
မှဲ့ က ပြောပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့အချစ်ရေး
မှဲ့ ကပြောပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့အချစ်ရေး… ပါးပေါ်က မှဲ့ပိုင်ရှင် ရည်းစားရဖို့ ဘယ်တော့မှအောက်ကျမခံဘူး။ သေလောက်အောင်ချောနေ လန်ထွက်နေပါစေ သဲသဲလှုပ် ချစ်မပြတတ်ဘူး …. ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူထက် ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲ ဖူးစာပါရော။ နဖူး..ပေါ်က မှဲ့ပိုင်ရှင် သနားတတ်တဲ့စိတ် အားနာတတ်တဲ့စိတ်ကြောင့် ချစ်သူတစ်ယောက်ရတတ်တယ်။ အဲ့ချစ်သူက အနိုင်ယူတာ ခဏခဏငိုအောင်စိတ်ညစ်အောင် လုပ်တာကြုံရတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်… အဲ့ချစ်သူကပဲ သင့်ကို သစ္စာရှိရှိ ချစ်မယ့်သူ ဆိုတာမမေ့နဲ့။ မျက်ခုံး..တစ်ဝိုက်က မှဲ့ပိုင်ရှင် အချစ်စစ်ရဖို့ အချိန်တွေမနည်းရင်းရတတ်တယ်။ စန်းပွင့်ပြီး လူချစ်လူခင် ပေါတယ်။ အသေရရ အရှင်ရရ ချစ်ပြမယ့်သူတွေရှိလို့ ပတ်ဝန်းကျင်က အားကျရတဲ့သူ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်း အချစ်နဲ့ပက်သက်ရင် ကံနိမ့်တတ်တာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိတယ်။ မျက်လုံးအိမ်..ထဲက မှဲ့ပိုင်ရှင် မာနကြီးတယ်။ ရည်းစားတစ်ယောက်ကို လွယ်လွယ်မထားတတ်ကျဘူး။ ချစ်ပြီဆို … Read more
ရှေးလူကြီးတွေပြောပြတဲ့ လူသိနည်းပြီး သတိမမူကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ်…
“ရှေးလူကြီးတွေပြောပြတဲ့ လူသိနည်းပြီး သတိမမူကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ်” ၁။ အပျိုတွေ တံမြက်စည်းကျော်မိရင် အိမ်ထောင်မကျခင် ဗိုက် ကြီးတတ်ပါတယ်။ ၂။ အပျို၊ လူပျိုတွေ ခြေဖျား‌ပေါ်ကျော်ပြီး တံမြက်စည်း ခတ်မိရင် အဲ့ကလေးတွေ အိမ်ထောင်မကျတော့ပါဘူး။ တံမြက်စည်းကို တံတွေးနဲ့ ပြန်ထွေးခိုင်းပါ။ ၃။ အိမ်နီး ခြံနီးချင်းတွေ ကိုယ့် အိမ်/ ခြံဝကစပြီး တံမြက်စည်း လာလှည်းသွားရင် ဝင်မယ့်လာဘ် မဝင်တော့ပါဘူး။ သူ့အိမ်‌ဝက ပြန်လိုက်လှည်းယူပါ။ ၄။ တံမြက်စည်းသစ်နဲ့ အိမ်ထဲကအိမ်ပြင် စ မလှည်းရပါဘူး။ ပစ္စည်းတစ်ခုခု အိမ်ဝချပြီး အိမ်ထဲအရင် လှည်းထည့်ရပါတယ်။ ၅။ ကိုယ့်မိသားစုတွေ အကုန်ကံဆိုး‌နေတယ်ထင်ရင် ရှေ့၊ နောက် အိမ်တံခါး‌တွေဖွင့်ထားပြီး အိမ်ရှိလူကုန် အိမ်လယ်ကစ ရှေ့‌နောက်အ‌ပေါက်ဘက်ကို တံမြက်စည်း လှည်းခိုင်းပါ။ ၆။ အိမ်ဝင်တံခါးမှာ … Read more
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက စက်ရုံလုပ်သား (၆)သိန်းကျော်အတွက် သတင်းကောင်းလေးလာပါပြီ
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက စက်ရုံလုပ်သား (၆)သိန်းကျော်အတွက် သတင်းကောင်းလေးလာပါပြီ Stay at Home ကာလ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ဖွင့်လှစ်ခွင့်မပြုထားသောလုပ်ငန်းများမှ ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများအတွက် လုပ်ခလ စာထောက်ပံ့ပေးနိုင် ရေး ယနေ့(စက်တင်ဘာ ၂၆) တွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ရာ … ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီး ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်၊ အစည်းအဝေးသို့ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် (UM FCCI)မှ ဥက္ကဌ ဦးဇော်မင်းဝင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးဝေဖြိုး၊ဦးသောင်းတင် ၊အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးအေးဝင်း၊ တွဲဖက် အထွေ ထွေအတွင်းရေးမှူးများ။ ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံဝန်ထမ်းများအား ထောက်ပံ့ငွေပေးမည့် အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီး ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်၊UMFCCI ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်း ဝင်းနှင့်တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်တို့ကို ဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း … Read more
01.10.2020 မှ 07.10.2020 အထိ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း…
01.10.2020 မှ 07.10.2020 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ….. ယခုကာလအတွင်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများ အလုပ်တွင် အပျက်အစီး၊ အဆုံးအရှုံး၊ အလေ အလွင့်များနေတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်သည်များ အိမ်ထောင်ဖက်ကို စိတ်တိုင်းမကျခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေး အဆင် မပြေခြင်းများ ဖြစ်နေတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေးညံ့တတ်ပါသည်။ နေနိုင်ရင်ဒီကာလအတွင်း အရက် မသောက်ပါနဲ့။ ကျောက်ကပ် နဲ့အသည်း အားနည်းချိန်မို့ပါ။ မိမိအိပ်မက်တွင် ဘိုးတော်များ ၊ မြင့်မြတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများကြွလာသည်ဟုမြင်မက်ပါက အထူးကောင်းသော နိမိတ်ဖြစ်သည်။ ကံညံ့နေချိန်ဆိုပေမယ့် သိပ်အဆိုး ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ မပြော ပလောက်တဲ့ အညံ့လေးတွေ ကြုံတွေ့ ရတတ်ပါတယ်။ လူမျိုးခြားက ကူညီခြင်း၊ နိုင်ငံရပ် ခြားနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများ အောင် မြင်လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းများ … Read more
သမီးကတော့ကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြီးကို အနိုင်တိုက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ပေမဲ့ အိမ်မှာကြိုနေမဲ့မေမေမရှိတော့ဘူး ရင်ထဲမကောင်းလိုက်တာ…ဒီထက်နာတဲ့ ဇာတ်ရှိပါဦးမလား အဒေါ် နှင့် တူမ Positive (မှ) Negativeဖြစ် အိမ်ပြန်ခရီး ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံမှ မအူပင်အပိုင် ရွာဘက်က နေအိမ်သို့ ကရုဏာ(မအူပင်မြို့) အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် (003)ဖြင့်ပြန်လည်ခေါ်ပေးခဲ့တယ်…. ဇာတ်လမ်းက…..14ရက်နေ့ မှာ မီးဖွားဖို့ဆေးရုံတက်….16ရက်နေ့မှာ ခွဲမွေးတယ်….. 18ရက်နေ့မှာ ကလေးရော၊အမေပါ +တွေ့တယ်တဲ့….22 ရက်နေ့မှာ အမေကို ဖောင်ကြီးပို့တယ်…. အဲဒီနေ့မှာပဲ အမေက ဆုံးသွားတယ်….အဖေက ဆေးရုံစောင့်ရင်း + ဖြစ်ပြီး တနေရာမှာQဝင်နေရတယ်။ ကလေးက မနက်ဖြန် သက်သာလို့ ဆေးရုံကဆင်းရမယ်။ ဒီမိသားစုရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ ကိုဗစ်ဆိုတာကြီးသာ မရှိခဲ့ရင် မွေးပြီးတာနဲ့ မိသားစုပျော်ပျော်ပါးပါးအိမ်ပြန်ရမယ့်ဇာတ်။ အခုတော့ ….သေကွဲရော ၊ ရှင်ကွဲရော လူ့လောကရောက်ရုံရှိသေးတယ်….တစ်ပြိုင်ထဲခံလိုက်ရတဲ့ လောကဓံ ပြင်းလွန်းတယ်။ … Read more
ယုန်လေးကို Foul ထုပြီး နိုင်ငံရေးထဲဆွဲထည့်တဲ့ ဒါရိုက်တာသရုပ်ဆောင် ၀ိုင်း….
ကိုဝိုင်းရေ အစ်ကို့ ကြည့်ရတာ အကုသိုလ် များလိုက်တာဗျာ …. ကျွန်တော် အစ်ကို အနုပညာကို လေးစားတဲ့ လူပါ …. အစ်ကို့ ကို တစ်ခါ မှ Foul မထုဖူးပါဘူး …. တွေ့တိုင်းလည်း လေးလေးစားစားဆက်ဆံပါတယ် …. ဘယ်လိုဖြစ်လို့ . နိုင်ငံရေးထဲ လိုက်ဆွဲထည့်နေတာလဲ…. ဘယ်သူကရော MI STAR ကြေညာကို စိတ်ဝင်စားခိုင်းလို့လဲ. . . မိန်းကလေး အကောင့်အစစ်တွေတစ်ချို့ တကယ်သူတို့ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေဖြစ်သွားတယ်… ဒီလောက်ပဲ မဟုတ်ဖူးလား ….အမူ့မကြီးကြီး အောင်ဆွဲချဲ့ကျတယ် …. ကြီးသွားတော့ အာရုံလွှဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီး ထပ်စွတ်ဆွဲတယ် . … အနုပညာ အလုပ်အကုန်ရပ်ပေးစေချင်တာလား …. Fbပါ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးမှ သုံးရတော့မှာလားဗျာ….။ unicode … Read more
(၂၀)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆုရှင် ထွက်ပေါ်
(၂၀)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆုရှင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့ မှထွက်ပေါ် သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု သုံးကြိမ်မြောက်ရတဲ့ ဟင်္သာတမြို့ ၁၊အောက်တိုဘာ၊၂၀၂၀။ ဒီနေ့မနက်ကျင်းပတဲ့ အကြိမ် (၂၀)မြောက် အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲမှာ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို ဟင်္သာတမြို့ မင်္ဂလာစွယ်တော်ထီဆိုင်မှာထိုးခဲ့တဲ့ ဦးခင်မောင်ညွှန့်က ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်။ အောင်ဘာလေထီဆုကြေးကို သိန်းတစ်သောင်းခွဲအဖြစ် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခဲ့အပြီး အကြိမ်( ၂၀) အတွင်းမှာ ဟင်္သာတမြို့က( ၃) ကြိမ်ရရှိခဲ့တာပါ။ ဒါအပြင် နတ်မော်လမ်း ၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ(၁)အရှေ့က၊မင်္ဂလာစွယ်တော်ထီဆိုင်ကပဲ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ နှစ်ကြိမ် ကံထူးခဲ့တဲ့ ထီကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ဦးတင်မောင်ညွန့်ကို ဆက်သွယ်လျက်ရှိပြီး ပေးခဲ့သည့်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ဆက်သွယ်မရဖြစ်နေသည်ဟု သိရပါသည်။ ဦးတင်မောင်ညွန့်သည် ရွှေမြန်မာထီဆိုင်မှ တစ်ဆင့် ကိုယ်စားလှယ်ယူရောင်းသည့် ဟင်္သာတမြို့ရှိ မင်္ဂလာစွယ်တော်ထီဆိုင်မှ စက်တင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့က … (၉)မျိုး(၉)စောင်ထဲကမှ နှစ်စောင်ရွေးထိုးသွားရာမှ … Read more
(၂၀)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် စ/ဆုံး တိုက်လို့ရပါပြီ…
October 1, 2020 October 1, 2020 by Padaethar
(၂၀)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် စ/ဆုံး ပေါက်ဂဏန်းအားလုံးEditလုပ်တင်ပးပါမည် #သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု လ ၉၁၄၂၃၇ #သိန်းတစ်သောင်း ရ ၉၅၈၈၂၇ #သိန်းငါးထောင် ဓ ၅၀၈၅၉၂ အ ၉၂၉၉၉၂ #သိန်းနှစ်ထောင် ခ ၅၉၂ဝ၈၈ ဂ ၇၃၄၅၆၁ က ၄၅၃ဝ၄၄ ည ၄၁၈၄၄၆ ကခ ၉၄၀၅၇၈ #သိန်းတစ်ထောင်ဆု ဘ ၃၅၃ဝ၅၇ ဓ ၇၆၂၉၈၈ ဇ ၇ဝ၉၅၅၉ ဗ ၆၂၂၆၅၄ ကဆ ၂၁၅၄၇၄ ဟ ၉၂၃၂၆၇ ကဂ ၁၅၄၇၅၅ (၃)သိန်းဆုများ အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းငါးလုံးအစဉ်လိုက်တူရမယ် ဓ ၁၁၈၄ဝ ဖ ၁၅၉၅၇ ရ ၆၇၉၁၉ န ၇ဝဝ၃၁ ဗ ၄၇ဝ၄၈ ကက ၃၅၉ဝ၉ … Read more
အကြိမ်(၂၀)မြောက် ထီပေါက်စဉ် ထီတိုက်လို့ရပါပြီ…
(၂၀)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ်(​အောက်​တိုဘာ၁) ပေါက်ဂဏန်းအားလုံးEditလုပ်တင်ပးပါမည် #သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု လ ၉၁၄၂၃၇ #သိန်းတစ်သောင်း ရ ၉၅၈၈၂၇ #သိန်းငါးထောင် ဓ ၅၀၈၅၉၂ အ ၉၂၉၉၉၂ #သိန်းနှစ်ထောင် ခ ၅၉၂ဝ၈၈ ဂ ၇၃၄၅၆၁ က ၄၅၃ဝ၄၄ ည ၄၁၈၄၄၆ ကဂ ၁၅၄၇၅၅ #သိန်းတစ်ထောင်ဆု ဘ ၃၅၃ဝ၅၇ ဓ ၇၆၂၉၈၈ ဇ ၇ဝ၉၅၅၉ ဗ ၆၂၂၆၅၄ ကဆ ၂၁၅၄၇၄ ဟ ၉၂၃၂၆၇ ယခုပို့တွင်​အချိန်​နဲ့တ​ပြေးညီဆက်​ဖြည့်​ပါမည်​ Like&Shareထားပါခင်ဗျ…Powerထီဆိုင် unicode (၂၀)ကွိမျမွောကျ ထီပေါကျစဉျ(အောကျတိုဘာ၁) ပေါကျဂဏနျးအားလုံးEditလုပျတငျပးပါမညျ #သိနျးတဈသောငျးခှဲဆု လ ၉၁၄၂၃၇ #သိနျးတဈသောငျး ရ ၉၅၈၈၂၇ #သိနျးငါးထောငျ ဓ ၅၀၈၅၉၂ အ ၉၂၉၉၉၂ … Read more